အင်တာနက်သုံးသူတို့အတွက် အထူးသတင်း(သို့)Key Logger | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » အင်တာနက်သုံးသူတို့အတွက် အထူးသတင်း(သို့)Key Logger
အင်တာနက်သုံးသူတို့အတွက် အထူးသတင်း(သို့)Key Logger
Posted by panpan on Jul 5, 2011 in Computer & Cell Phone, Computers & Technology, Environment, Other - Non Channelized, Software & Links |7comments
email internet key-logger security
ဟုတ်တာပဲလုပ်လုပ်.မဟုတ်တာပဲလုပ်လုပ်ပေါ့ဗျာ..ဒီအောက်က သတိပေးစာလေးကိုတော့ လျစ်လျူရှုထားလို့မရတဲ့အတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။အီးမေးလ်မှ ရောက်လာတာကို
အင်တာနက်သုံးသူတို့အတွက် အထူး သတင်း on ♥ မြန်မာချစ်သူများ ♥မြန်မာပြည်တွင်းက အချို့သော ဆိုင်ဘာကဖီး(သို့) အင်တာနက်ဆိုင်များမှာ key-logger ဟုခေါ်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲများ ထည့်သွင်းထားပြီး လာရောက် သုံးစွဲနေသူတွေအထဲမှာမှ နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ပြည်တွင်း ပြည်ပဆက်သွယ်နေကြတဲ့ ပြည်တွင်းမှတတ်ကြွလှုပ်ရှားသူများအားခြေရာခံ နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နေမှုများ ရှိနေပြီး ထိုကဲ့သို့တတ်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား ဖမ်းဆီးမိနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ထားတာတွေရှိနေပါသည်။
keylogger ဆိုသည်မှာ window စတက် စဉ်ကတည်းက စအလုပ်လုပ်နေပါသည်။ ပိတ်လိုက်လည်း နောက်ကွယ်မှာ လုပ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ tray icon လည်းပေါ်နေခြင်းမရှိ၍ငှင်းအလုပ်လုပ်နေမှန်း မသိနိုင်တော့ပါ။ ၎င်းမှမိမိ keyboard တွင်ရေးလိုက်သမျှ၊ mouse နဲ့နှိပ်လိုက်သမျှများ အားလုံးအား အချိန်နဲ့တကွ မှတ်ထားပေးနေပါသည် .. ။ ထိုအခါ မိမိတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်သက်ဆိုင်သမျှ အားလုံးအား ငှင်းဆော့ဖ်ဝဲမှ မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်နေ၍ လုံခြုံမှုလုံးဝမရှိနိုင်တော့ပါ။ (All in 1 key-logger သာဆိုပါလျှင် ဓါတ်ပုံများ၊ အသံများနှင့် ဗီဒီယိုများ အစရှိသဖြင့်အစစအရာရာအားအတိအကျပင် ၎င်းကမှတ်သားထားပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါသည်။)
ထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲမျိုးအား ကွန်ပျူတာတွင်သွင်းထားပြီး လာရောက်သုံးစွဲသည့်သူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအားအတိအကျ ထောက်လှမ်းထား နိုင်၍ မိမိတို့အနေဖြင့် ဆိုင်ဘာကဖီးသို့မဟုတ်တစ်ပါးသူ၏ ကွန်ပျူတာအားသုံးစွဲတော့မည်ဆိုပါက မိမိသုံးစွဲမည့် ကွန်ပျူတာထဲတွင် ငှင်းဆော့ဖ်ဝဲအား ရှိမရှိ အရင်ဆုံးစစ်ဆေးကြည့်ဖို့အတွက် အလေ့အကျင့်လုပ်ထားပါက အကောင်းဆုံးနှင့်လုံခြုံမှု အနည်းငယ် ပိုမို၍ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက် အလက်များအား သူတစ်ပါးဆီပါမသွားနိုင်အောင်လုပ်ရမည့်နည်းလမ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ .
ပထမဦးစွာ Ctrl+Shift+Esc(or)Ctrl+Alt+Del နဲ့ Task manager ကို ခေါ်လိုက်ပါ ..။ Task manager ဝင်းဒိုးတက်လာပါက Process ဆိုတဲ့ tab ကို နှိပ်ပြီး msdts.exe ဆိုတာကို လိုက်ရှာကြည့် ပါ ။ ရှိနေခဲ့လျှင်ထိုကွန်ပျူတာတွင် keylogger အသုံးပြုထားပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ရှိပြီဆိုလျှင်ငှင်းဖိုင်လ်အား End process ပေးလိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည် ။
ထိုသို့ end process လုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ငှင်းလုပ် ဆောင်နေသည့်လုပ်ငန်းတွေအားလုံး ပြီးဆုံးသွားပြီး မိမိလုပ်ကိုင်နေသည်များ ကိုလဲမှတ်ထားတော့မည် မဟုတ်တော့ပါ။ Task Manager ကို အထက်ပါအတိုင်း ကီးသုံးခုနှိပ်တာအပြင် window logo+R နှိတ်ပြီးတတ်လာတဲ့ Run box မှာ taskmgr လို့ရေးပြီး ခေါ်ယူလဲရပါ်သည်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာtask manager မှာရှိနေသော process tab ထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေထဲကကိုယ်သုံးမယ့် gtalk လောက်ပဲအိုကေထားပြီး ကျန်တာတွေကို disable သို့မဟုတ် end process ပေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ရိုးရိုးယူဆာတွေအနေနှင့် ဘယ်လိုဖိုင်အမျိုးအစားက အချက်အလက်တွေကို ရီကော့လုပ်တာလဲဆိုခြင်းကို မသိနိုင်၍အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်း ၎င်း process tab ထဲတွင်ရှိသမျှဖိုင်လ်များအားလုံးအား end process လုပ်ပြီးမိမိအသုံးပြုမည့်ဖိုင်လ်ကိုပဲ manually ခေါ်သုံးတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ task manager ကိုခေါ်လို့မရခဲ့ပဲ admin အခွှင့်အရေးရှိမှရမည် ဆိုလျှင်တော့ ထိုသို့သော အင်တာနက်ကဖီးမျိုးကို ရှောင်ဖို့သင့်ပါသည်။ စိတ်ချရသည့် နည်းပညာပိုင်း အားနည်းသောအင်တာနက်ဆိုင်ကိုသာ သွားရောက်အသုံးပြုစေချင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နည်းပညာအရ အဆင့်အတန်းငှင်းဆိုင်တွင် အသင့်အတင့်မြင့်နေပြီဖြစ်၍ တော်ရုံမဟုတ်တော့ဘူးဟူ၍ ယူဆလို့ရနိုင်နေပါသည်။ ပြီးနောက် keyloggerတွေထဲမှာပင် လျှင် အွန်လိုင်းဝဘ်ပေ့ဂျ်မှာတင်လို့ရသည့် keyloggerနှင့်hardware keyloggerဆိုပြီးရှိနေပါသေးသည်။ ငှင်းတို့အားသုံးစွဲထားသည့် ကွန်ပျုတာမှဆိုလျှင် taskmanager ခေါ်ပြီး end process ပေးလိုက်လျှင်တောင်မရနိုင်တော့ပါ။
ထို့အတွက် အများကြီး သတိထားနိုင်ကာမှ တော်ကာကျမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုပို့စ်လေးကို ရေးပြီးမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကို ပို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှ့ာပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ရက်ကပဲ ကျွန်တော့်ကိုပြည်တွင်းမှတတ်ကြွလှုပ်ရှားနေသူ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်မှနေ၍ ရန်ကုန်ုမြို့တာမွေမြို့နယ် ကျောက်မြောင်းအရပ်တွင် ရှိသော အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတစ်ယောက် ပြည်ပနှင့် အဆက်အသွယ်လုပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရ၍ဆိုကာ အထောက်အထားနှင့်တကွ အဖမ်းခံရတယ်ဟုပြောပြခဲ့၍ အခြားသောပြည်တွင်းမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ အနှေနှင့်နည်းပညာပိုင်း အရ ရှောင်လွှဲလို့ရနိုင် တဲ့အချက်လေးတစ်ချက်အဖြစ်နဲ့ တစ်ဘက်တစ်လမ်းကနေ အထောက်အကူ ဖြစ်စေချင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုင်က Task Manager ရယ်…. Run Command Box ရယ် Permission ပိတ်ထားရင်ရော…
လုံခြုံရေးအနေနဲ့ ရှိထားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်..ကီးလော့ဂါရှိတော့ရော..ကို့မေးလိပ်စာပါတာမှမဟုတ်တာ တကယ်လို့သံသယဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ စကားဝှက်ချိန်းလို်က်ပေါ့.. onscreen keyboart ဆိုတာလေးလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကိုသံသယရှိခဲ့ရင်အဲဒါလေးနဲ့သုံးပေါ့
Keylogger နဲ့ ပက်သက်ပြီး နည်းနည်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော် နည်းနည်း စမ်းသပ်ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော် စမ်းသပ်ဖူးတဲ့ Keylogger က Keylogger ပါပဲ။ Serial key ရော ပါပါတယ်။ သူ့ကို ကွန်ပျူတာ မှာ Install လုပ်ထားပြီး ဆိုရင် သင်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကို အကုန် ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ သင် စာရိုက်တာရော ၊ ဘယ် ဝက်ဘ်ဆိုက် ကြည့်တာရော။ အကုန်ပါပဲ။ ကိုယ်မှာ ကိုယ်ပိုင် ဆာဗာ ရှိခဲ့တယ် ဆိုရင် ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှာ တင်ထားပြီး ကိုယ် ဆာဗာကနေ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒီ ကွန်ပျူတာ မှာ ရှိတဲ့ Logs ဖိုင်ကို လာကြည့်စရာ မလိုပါဘူး။ ပြီးတော့ Html ထုတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် အီးမေးလ် ဆီကိုလည်း ပို့လို့ ရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ ပေါ်က မျက်နှာပြင်ကို ၅ စကန့် တစ်ခါ လည်း ပို့ လို့ ရပါတတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ် ဘာလုပ်လုပ် သိလို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော် သိတဲ့ Keylogger ကို ခေါ်ချင်ရင် Run box ကို ဖွင့်ပြီး runkgb လို့ ရိုက်ပြီး ခေါ်ရပါတယ်။ Utimate ဆိုရင်တော့ Password တောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဂရုစိုက်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင်လဲဆိုတော့ Keylogger သုံးတာက Hacking လုပ်ဖို့ အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်းမို့လို့ပါ။ နည်းနည်း နားလည်ရင် သုံးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ပါ။
မသမာသူတွေလက်ထဲ ကိုယ့်ဒေတာတွေရောက်သွားရင် ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်